एक महिला राम्ररी groomed हात, सामाजिक स्थिति, रोजगारी र कामको स्थान बिना हुनुपर्छ। लामो नङ ज्यादातर महिलाहरु घरेलू घरधन्दा कम बोझ गर्न किन्न सक्छन् छन्। र खाना पकाउनु प्रेम गर्ने बालिका, बर्तन मा बिरुवाहरु को एक किसिम र थप उपनगरीय क्षेत्रमा बढ्न हामी छ छैन त उल्लेखनीय marigolds चयन गर्न छ। आज हामी उज्ज्वल को विचार विचार गर्न प्रस्तावित छोटो नङ मा नङ पालिस। डिजाइन को लागि हामी प्रकाश रंग तिनीहरूले सर्वश्रेष्ठ हेर्नेछौं किनभने चयन गर्नुहोस्। उज्ज्वल पेंट्स - तेज नंग्रा को मालिक को विशेष अधिकार।
सजिलो, सुविधाजनक, स्टाइलिश, आर्थिक
आकर्षण छोटो मैनीक्योर गणना छैन। नङ को डिजाइनमा मुख्य कुरा हो - सरलता, सजिलो, समय को एक सानो राशि। यो सबै एकदम हाम्रो संकटग्रस्त दिनमा महत्त्वपूर्ण छ, एक महिला घर, छोराछोरी, पकाउने खाने बीच भताभुङ्ग छ, एक क्यारियर आकार जस्तै छ, र फिर्ता बाटोमा - सुपरमार्केट मा जगिंग।
निस्सन्देह, अतिरिक्त समय बचत छोटो नङ मा मैनीक्योर मदत गर्नेछ; प्रकाश रंग, कुना मा पनि skolovshis र त्रुटि रूपमा उज्ज्वल बिरालो नंग्रा संग घातक सौन्दर्य को पाखुरामा रूपमा देखिने छैन देखि तंत्रिका कक्षहरू पनि, बचत गर्नुहोस्।
एकदम कम हुँदा छोटो मैनीक्योर एक मोजा धारण भताभुङ्ग। साथै, आफ्नो मनपर्ने घृणित शब्द सुन्न छैन: "प्रिये, म नै नङ छ!" कम वार्निश खर्च, तपाईं पैसा बचत हुनेछ। को पेशेवरों गर्न सस्ता लागत hikes। तपाईं लामो marigolds को मालिक भन्दा धेरै लाभ छ सहमत,! विचार आफ्नो मैनीक्योर सजाने तिनीहरूलाई भन्दा अलि कम, तर थप सिफारिसहरू आफ्नो कलम ध्यान बिना रहन हुनेछ।
आफ्नो हात को हेरविचार
पहिलो टिप सफा छ। skolovshiysya नङ, cuticles, नङ घिसना हटाउन भूल छैन। यसलाई आफ्नो राज्य मानिस को समग्र प्रभाव निर्भर कारणले पर्याप्त, छाला हाइड्रेट गर्न आवश्यक पनि छ। तपाईं खराब अवस्थामा थिए हेर्न - तपाईं सुक्खा हात, oblezshy वार्निश, पनि lightest, र पारदर्शी रंग छ भने। यसबारे वा सबैभन्दा सुन्दर मेकअप वा ड्रेस एक स्टाइलिश तरिका ठीक छैन। नङ र हात - कि दोस्रो सबै पार्टी पछि मानिसहरूलाई ध्यान के।
त्यसैले, हामीलाई राम्रो, हेर्न सही तपाईंको कलम सजाउनु हुनेछ जो डिजाइन र रेखाचित्र चयन गर्न सिक्न गरौं। के म छोटो नङ मा एक मैनीक्योर सिर्जना गर्ने, ध्यान गर्नुपर्छ?
प्रकाश रंग - आफ्नो सबै। यसलाई कुनै पनि रंग हुन सक्छ, तर अझै पनि, प्रकाश नाजुक, प्यास्टेल। उज्ज्वल रंग नेत्रहीन को नङ छोटो हुनेछ।
यो रूपमा प्रत्येक नङ मा फूल को एक फूलगुच्छा "थप्पड मारा" यस्तो विचार त्याग्न वा तिनीहरूलाई विशाल रंगीन पुतलीहरु मा आकर्षित गर्न छ। धेरै सानो फूल को रूप वा कुनामा एक तस्वीर मा तस्वीर चयन गर्न राम्रो।
रंग मा रंग छैन थप तीन भन्दा वर्तमान हुनुपर्छ।
बेल, मोडेलिंग र अन्य भारी वस्तुहरूको शैलीहरू को एक किसिम मा एक्रिलिक मूर्तिहरु - तपाईं को लागि। मैनीक्योर अन्यथा यो प्रत्येक fingertip अनावश्यक कुरा भयो कि जस्तो थियो, चेप्टो हुनुपर्छ।
रेखा को रूप मा एक डिजाइन छोटो नङ मा उज्ज्वल नङ पालिस, पनि, सही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तेर्सो धर्काहरू जोगिन: तिनीहरूले नेत्रहीन को प्लेट व्यापक बनाउन, दूर लामो लिन। ठाडो रेखा डिजाइन प्रयोग गर्नुहोस्।
त्यसैले, थाह मुख्य नियम, अब तपाईं डिजाइन विचार को विचार गर्न अगाडि बढ्न सक्छ।
आदर्श - फ्रान्सेली
के छोटो नङ मा नङ पालिस हुनुपर्छ? प्रकाश ज्याकेट - सबैभन्दा महिलाहरु को प्राथमिकता। उहाँले सम्म फिर्ता 1976 रूपमा दर्ता प्लेट सबै प्रमुख प्रकार बीच चुनिएको थियो, र हालसम्म कुनै एक impeachment यस प्रकारको घोषणा गरेको छ। हलिउड सुंदरियों प्रदर्शन र बहुमुखी प्रतिभा को आफ्नो सजिलो लागि यो मैनीक्योर प्रेम। फ्रान्सेली कुनै पनि शैली र अवसरको लागि सिद्ध छ।
उज्ज्वल नङ पालिस जेल लाह गर्न विशेष गरी सरल छ। परिषद विकल्प छोटो प्लेट तर्फबाट लागि व्यवसायीक नङ डिजाइन। गोलो आकार मा जो नीलो, फिरोजा, पहेंलो, हल्का हरियो र हल्का गुलाबी रंग मा कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ "मुस्कान", को कुना गर्न कुना बाट पूर्ण बाङ्गो हेर्न हुनेछ। को नङ वर्ग हो भने, पट्टी सामान्य भन्दा पतली गर्नुपर्छ। सीमानाहरू किनारा वा प्लेट को कुना मा स्थित सजावट rhinestones लागि उपयुक्त। एक लाइन रूपमा "मुस्कान" सुन वा चाँदी रंग परिभाषित गर्न सकिन्छ। ह्यान्डलहरू कोमल, राम्रो-groomed र स्मरणीय साथ प्राप्त छन्।
छोटो नङ मा एक साँच्चै सुन्दर डिजाइन बनाउन सबै नीलो को रंग बस सिद्ध हुनेछ। सबै भन्दा लोकप्रिय फिरोजा र आकाश नीलो मैनीक्योर छ। रंग दुवै स्वतन्त्र र dilution संग प्रयोग गरिन्छ। नीलो वा सुन, चाँदी, पहेंलो, हरियो, गुलाबी, र प्यास्टेल रंग फिरोजा चयन टन को सुरिलो संयोजन लागि। तपाईं चयन रंग मात्र अज्ञात औंलाहरु को एक रंग र rhinestones, वा रूढिवादी आंकडा, र बस नीलो गरेको बाँकी नङ तिनीहरूलाई सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ। नीलो वा फिरोजा रंग संग संयोजन लागि घन्टी औंला मा विकल्प सजावट नङ तल प्रस्तुत गरिएको छ।
बाह्य कुनामा वा cuticle नजिकै - तपाईं यसलाई सुन ट्रिम मा एक गुलाबी वा फिरोजा हृदय राख्न, सेतो पृष्ठभूमि रङ चयन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, सुन रंग स्पेस, "मोती" बाँकी धारण गर्न सकिन्छ। तल दुई, को cuticle नजिकै र बाहिरी कुना मा एक - तपाईं लम्बाइ (छैन मूल मा प्लेट कट) अनुमति भने, तीन हृदय बनाउन। तपाईं गुलाबी र फिरोजा रंग संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ, र सबै सुन rims संग।
छोटो नङ मा सेतो नङ पालिस
यो डिजाइन लाभप्रद रुप र उज्ज्वल र कालो छाला हुनेछ। सेतो वार्निश स्ट्यान्ड छाया वा एक पतला फारममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। राम्रो विचार आफ्नो टिप रातो लाह नाजुक पातलो जडिबुटी वा भेला फूल कली घुमावदार को रूप मा ढाँचा गर्न नङ को आधार को किनारा साथ चित्रित हुनेछ। त्यहि उद्देश्य सुट नीलो, सियान, पहेंलो र कालो। सेतो लाह तिमी अगाडी पृष्ठभूमिमा मा तीन रंग सम्म संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ, विश्वव्यापी छ।
छोटो नीलो मटर सानो सेतो नङ मा आकर्षक हेर्न हुनेछ। तिनीहरूले फेरि मात्र Nameless औंलाहरु आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ।
छोटो नङ मा सिद्ध मैनीक्योर। खैरो पत्र संग हल्का पृष्ठभूमि लग धेरै आकर्षित हुनेछ। तसर्थ, हामी मात्र होइन हेर्न सक्छन् स्टाइलिश, तर पनि आगामी परीक्षा लागि cribs बाली (नोट!)।
धेरै सजिलै नङ मा "अखबार" छ। यसको सिर्जनाको लागि, एक डिजाइनर वा कलाकार हुन आवश्यक छैन। तपाईंलाई आवश्यक:
कागज को टुक्रा;
यस अन्तर्गत प्रकाश वार्निश पृष्ठभूमि रङ अखबार वा सेतो को।
नङ पूर्ण आधारभूत टोन द्वारा ढाकेका छन् सुरु गर्न (तपाईँले जग अन्तर्गत प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले प्रत्यक्ष अब मैनीक्योर)। पूर्ण ड्राई गर्न रंग लागि प्रतीक्षा बिना, रक्सी को एक तयार कन्टेनर मा आफ्नो औंलाहरु को सुझाव डिप। लामो पर्याप्त र पाँच सेकेन्ड राख्न थिएन। कस तयार कागजात प्रत्येक पन्जा टुक्रा संलग्न वा दुई सेकेन्ड रेकर्ड तुरुन्त गर्न धीरे कोटिंग हानिकारक बिना हटाउन। रंग सुक्खा हुँदा, कि अक्षरहरू छोटो समयको लागि थकित छैन स्पष्ट शीर्ष लागू हुन्छ।
पार्टी लागि विचार
उत्सव गर्न आकस्मिक आफ्नो मैनीक्योर विविधता गर्न, त्यहाँ पाङ्ग्रा reinvent कुनै आवश्यकता छैन छ। कहिलेकाहीं पनि सरल विचार साँचो कृति सिर्जना गर्न किन्न सक्छन्।
को नङ उज्ज्वल टोन कवर, हल्का नीलो, सेतो, गुलाबी (प्यास्टेल), हल्का खैरो वा केही अन्य रंग प्रयोग गर्नुहोस्। पूर्ण सुक्खामा अनुमति दिनुहोस्। त्यसपछि tinsel सुन लाह वा लिन , एक चाँदी रंग ठूलो रकम मा नङ को किनारा यसलाई लागू, र जमिनमा केन्द्र देखि negated को प्लेट मा ब्रश stretching। यो विधि लागि आदर्श सेक्विन अप सुकेको।
कसरी रेखाचित्र सिर्जना गर्न सिक्न
महिला को नङ हेर्दा तपाईं तस्वीर ग्यालरी प्राप्त ठान्छन्। त्यसपछि त्यहाँ बस छैन: फूल को masterpieces, "वास्तविक" बिरालो, पनि हात मा एफिल टावर संग Spongebob! यो एक आत्म सिर्जना गर्न असम्भव छ भन्ने देखिन्छ। यो त छैन! सबै तपाईं एक बरु छोटो नङ छ, विशेष गरी यदि जान्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले कला मूल कुराहरू सिक्न सजिलो हुनेछ। सुन्दर पलिश मैनीक्योर मात्र व्यवसायीक व्यापार मैनीक्योर द्वारा, तर एमेच्योर पनि पूर्ण बनाएको छ। त्यसैले, तपाईं सिर्जना गर्न सुरु?
सुरुमा चरण निर्देशनहरूको द्वारा चरण एक भिडियो ट्युटोरियल हेर्नुहोस्। त्यसैले यसलाई जहाँ सुरु र कसरी अगाडि बढ्न थाहा सजिलो हुनेछ। नङ स्वतन्त्र डिजाइन सुरु गर्दा - चिन्ता छैन: पहिले तपाईं आशा बाटो छैन प्राप्त गर्नेछ। तर समय, हात बलियो प्राप्त व्यावसायिकता वृद्धि हुनेछ, र तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो रचनात्मकता प्रसन्न गर्न पैदा नङ प्रेमिकाहरुलाई मा आकर्षित गर्न सक्छन्।
पहिलो प्रयोग को लागि floret आकर्षित: को पिच सानो थोपा को भिजेको सतह फरक रंग र दांत कोट्याउने सिन्का संग लागू वा सुई, तिनीहरूलाई तान्नुहोस् पत्रदल सिर्जना गर्ने, stems र पात। एक फूलको दल - एक ड्रप। पछि कल्पना प्रयोग पातलो ब्रश स्ट्रिप्स ज्याकेट विकास, अनपेक्षित रंग संयोजन मिश्रण। यदि तपाईं प्रयास गर्नुहोस्, त्यसपछि सबै बाहिर आउन पर्छ!
Podiatry - यो के हो? मास्को मा podiatry क्लिनिक: समीक्षा
टैंकको संसार खेल - रहस्य र सानो चाल
खाकी - मौसम 2013 को हिट
जामुन को प्रशंसक ध्यान दिनुहोस्: स्ट्रबेरी - रोगहरु र किरा, प्रविधि अग्रिम र बढ्दै
क्याम बोर्डहरू: प्राविधिक विशेषताहरु, आगो प्रतिरोध, ध्वनि इन्सुलेशन, वजन, फोटो
व्यावहारिक पेस्तोल शूटिंग: प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरण। खेल पेस्तोल। Makarov पेस्तोल